Ny fihaonana an-tampon'ny StreamGeek dia tonga any New York City - Vaovao an'ny NAB Show avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » Content Creation » Mitondra mankany New York City ny fihaonambe StreamGeek
Mitondra mankany New York City ny fihaonambe StreamGeek
Nosoratan'i Paul Richards, Lehiben'ny streaming streaming, StreamGeeks
Ny gymnity volamena Olaimpika dimy, Nadia Comăneci indray mandeha dia nilaza hoe: "Ankafizo ny dia ary miezaha mihatsara hatrany isan'andro, ary aza manary ny faniriana sy ny fitiavana ny zavatra ataonao." Ireo teny ireo dia nanakoako ny diako nanomboka tamin'ny nananganana azy. ny StreamGeeks ao 2017.
Amin'ity volana novambra ity, ny StreamGeeks dia handray an-tampony amin'ny fihaonana an-tampony mivantana ao NYC. Ity andro feno amin'ny fampianarana mivantana amin'ny streaming ity dia hanangona ireo saina lehibe ao amin'ny sehatry ny famokarana horonantsary sy marketing momba ny hoavin'ny media streaming. Nefa miandry, iza no StreamGeeks? Inona no heverin'ireto olona ireto hiaina mivantana?
Rehefa nanomboka tamin'ny fampitana mivantana tao 2015 aho, dia nanao izay mety ho diso rehetra nataoko. Taorian'ny herintaona dia namoaka renirano mivantana tamin'ny YouTube, ny orinasa dia nanomboka nahita fiakarana lehibe tamin'ny varotra sy fampahafantarana an-tserasera. Mampiasa ny PTZOptics fakan-tsary mivantana, nahitako aloka, ary nanomboka nanangana mpihaino voatokana. Tsy ela dia nitondra ny mpiara-miasa tamiko ary mpamokatra manontolo andro aho. Tamin'ny fotoana nanombohan'ny Facebook Live tao 2016 dia nanomboka nahazo trance bebe kokoa tamin'ireo mpihaino manerana izao tontolo izao ny ekipanay sy ny stream live. Nandeha tamin'ny YouTube sy Facebook izahay isaky ny zoma. Ny ony novokarinay dia azo antoka, ary nifanerasera tamin'ny mpihaino izahay tamin'ny fampisehoana azy ireo fa ny renirano mivantana dia tsy vokatra tsara. Na izany aza, rehefa nandeha ny fotoana dia tena lasa manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny saha izahay ary afaka mizara izany fahalalana izany amin'ny fitomboantsika manaraka. Tamin'io fotoana io dia nanapa-kevitra ny hanoratra ny boky aho Live Streaming dia Smart Marketing. ”Famaranana ny asa nataontsika, mampiseho ny diantsika amin'ny fomba izay maneho amin'ny hafa koa, afaka mifandraika amin'ny mpihaino koa izy ireo ary manangana ny marika amin'ny horonantsary mivantana. Nalainay ny mpamaky tamin'ny alàlan'ny fandaharana fampitaovana mivantana izahay satria tena te hanome izany fahalalana sy fahaiza-manao amin'ny hafa izany izahay. Nanampy ireo orinasa eo an-toerana izahay tao Chester County, Pa., Namokatra renirano voalohany indrindra. Namokatra ary niara-niasa mivantana izahay, mba hanampiana vola tsy mitady tombony ho an'ireo niharan'ny herisetra mahery setra, ary namokatra renirano mivantana an'ny onjam-peo eo an-toerana ihany koa izahay. Ireo traikefa ireo dia nahatonga anay hanana fotoana azo ampianarina ho an'ny mpihaino. Nozarainay tamin'izy ireo daholo ny zava-drehetra, avy amin'ny seho mialoha sy ny fampisehoana ny fametrahana ny fakantsarintsika handefa seho ao amin'ny studio podcast izay harahinay ny zava-drehetra nataonay. Ny famolavolana dia lasa famokarana feno ary mamela ny mpihaino antsika ho tonga amin'ny dingana rehetra.
Izany no nahatonga anay hanana hevitra hanangana fihaonana an-droa. Nahatsikaritra zavatra kely kokoa avy amin'ny seho mahazatra ara-barotra aho, misy fotoana ahafahan'ny mpanatrika manisy fifandraisana marina ary hahazo vinavina lehibe. Avy amin'izany, ny Fihaonambe StreamGeeks teraka.
Tamin'ny Nov. 8 tao amin'ny Dream Downtown any Chelsea, izaho sy ny ekipako dia manolotra fampianarana feno amin'ny live streaming. Manomboka amin'ny 8 am ka 5 hariva dia afaka miditra tamba-jotra mivantana miaraka ny mpanatrika
matihanina streaming sy amateurs mitady hamonjy mivantana ny orinasan'izy ireo. Ireharehako ny milaza fa ho tena fihaonambe voalohany amin'ny karazany any amin'ny morontsiraka atsinanana, ary izahay manolo-tena ny hanao izany ho fahatsiarovana tsy hay hadinoina.
Ny mpikabary am-pielezana StreamGeeks Summit dia Geoffrey Colon, filohan'ny Microsoft Advertising Brand Studio ary mpanoratra ny "Disruptive Marketing." Hifantohany amin'ny lahateniny ny herin'ny streaming mivantana sy ny fiantraikany amin'ny paikady marika, podcasting, indostrian'ny filokana. ny indostrian'ny mozika mivantana, sy ny fanatanjahantena. Chris Packard dia hiresaka momba ny sehatry ny streaming mivantana mivantana, LinkedIn Live. Samy hiaraka amin'ny CEO, ny mpitarika nieritreritra sy ny manam-pahaizana amin'ny orinasa.
Ho fanampin'ny fanangonana atrikasa sy tontonana, hisy ny fandraisana VIP tokana amin'ny alakamisy. Ny manam-pahaizana momba ny fampielezana finday any New York City izay nanorina ny Urbanist dia hanome fitsidihana ny distrikan'ny meatpacking, mandritra ny fandaharana mivantana!
Ka raha afaka maka sary hivoaka isan'andro ianao handrenesana mivantana amin'ny fampianarana sy tamba-jotra mivantana, dia hihaona aminay ao amin'ny Dream Downtown Nov. 8. Ny vidin'ny tapakila feno entana dia $ 295 ihany. Ao ny sakafo atoandro no hampidirina. Makà tapakila tsy ho ela satria ny hetsika dia voahidy amin'ny mpanatrika 250. Ny tapakila virtoaly dia misy ihany koa, ary ny tapakila virtoaly premium dia ahafahanao miditra amin'ny firaketana ireo atrikasa rehetra.
Manantena hahita anao ao amin'ny Big Apple koa aho!
Paul no Chief Streaming Officer ao amin'ny StreamGeeks ary mpanoratra ny "Live Streaming dia Smart Marketing." Mampianatra ny mpianatra 20,000 amin'ny UDEMY i Richards momba ny famokarana horonantsary mivantana, streaming finday, ary maro hafa. Nandray ny fampisehoana ofisialy NAB (National Association of Broadcasters) i Las Vegas i Richards ary mbola mitohy ho mpitondra eritreritra amin'ny indostria.
isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Spears & Arrows Ultra HD Forum	2019-10-01
Previous: Ny rafitry ny lectrosonics Venue2 dia hita ao amin'ny 941-960 MHz Band ankehitriny
Next: Fanambarana sokajy mamorona ho an'ny loka 2019 HPA